China HW 18MMx4x8 poplar Core Commercial Birch yokwakha ngamaplanga mveliso kunye nabenzi | Changyu
HW 1220 * 2440mm Okoume ngamaplanga
HW 1220 * 2440mm Umgangatho ophezulu ...
I-HW 1.5-5MM I-Thin Ilomb eNcinci ...
HW 18MMx4x8 poplar Core Commerce Birch yokwakha ngamaplanga
· Ukulayisha ubuninzi: 20'GP-8pallets / 22CBM, 40'HQ-18pallets / 50CBM
· Amandla okubonelela: 5000CBM / Inyanga
Imigaqo yokuhlawula: T / T okanye L / C.
Ixesha lokuzisa: Kwiintsuku ezingama-20 emva kokuqinisekiswa kwediphozithi
Isiqinisekiso: CE, FSC, EUTR, CARB，I-EPA, iJAS, i-ISO
Ubuso / uMva: I-Birch / i-Natural Birch / isiko
· Umxholo: Poplar / Eucalyptus / Combi
· Ubungakanani: 1220x2440mm / 1250x2500mm / isiko
· Ubukhulu: 5-30mm / isiko
· Iglu: E0 / E1 / E2 / Isiko
· Ukukhutshwa kweFormaldehyde: E0≤0.5mg / L, E1≤1.5mg / L, E2≤5.0mg / L
Ubuninzi: 520-700KGS / CBM
Umxholo wokufuma: <12%
I-Plywood iqulethwe yimiphunga emininzi yokhuni lweplanga olunika uzinzo oluphezulu, olulungele ukusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle. Ihlala isetyenziselwa ukuNgaphakathi kwezeMoto, ifanitshala, ukuhonjiswa kwamagumbi, uKwakha kunye nokuPakisha.
Apha ngezantsi kukho izibonelelo, kutheni abathengi bekhetha iplanga lethu:
Ixabiso elifanelekileyo le-veneer, umgangatho ophambili wepoplar ulungile.unokusetyenziselwa icandelo langaphakathi.
Umgangatho onzima nohlala ixesha elide, ubenze basebenzise ubomi obude.
Isiqinisekiso somgangatho weFektri, iingxaki zomgangatho? qhagamshelana nathi.
Upakishwe kakuhle, ukhuseleko olulungileyo ngelixa uhambisa.
Igama lemveliso HW 5-30MM ngamaplanga Commercial for Furniture
Ubungakanani 1220x2440mm / 1250x2500mm / okanye njengemfuneko yabathengi
Toleness Ukutyeba +/- 0.2mm (ubukhulu <6mm), +/- 0.3 ~ 0.5mm (ubukhulu≥6mm)
Ubuso / uMva E-Wood, Okoume, Ilomba, Poplar, Birch, Bintangor, Hardwood, Pine, Ipensile Cedar, Keruing, Agathis, Meranti, ect.
Inkcitho Ipoplar, umthi onzima, umhlathana, okoume, birch, ipayini, ikombi, ect
Indlela edibeneyo yeCore Ukuhlangana ngokudibeneyo, ukuphela ngokudibeneyo, isikhafu ngokudibeneyo okanye ukudibana komnwe
Iglu E0, E1, E2, MR, Melamine okanye WBP
IBakala B / BB, BB / BB, BB / CC, DBB / CC; Njl
Ukuxinana 520 ~ 700kg / m3
Iparameters technical Umxholo wokufuma <12%
Ukufunxa amanzi ≤10%
Iimodyuli zoLungelelwaniso Ixabiso elingu-
Amandla okugoba okungaguqukiyo 30Mpa
Amandla oMdibaniso womphezulu Iipilisi eziyi-1
Amandla eBonding angaphakathi Ixabiso eliphantsi
Ukujija amandla okubamba Ubuso 001900N
Ukusetyenziswa kunye nokusebenza Iplanga lisetyenziswa kakhulu ngaphakathi kwiZithuthi, ifanitshala, umhombiso, ulwakhiwo kunye nokupakisha. Ngeempawu ezintle, ezinje ngokulula, ukugoba okuphezulu, amandla okubamba okuqinileyo, ukunganyamezeli ubushushu, anti-static, ukuhlala ixesha elide kwaye akukho siphumo sonyaka.
Amandla okubonelela 5000cbm / ngenyanga
Immimiselo yokuhlawula T / T okanye L / C xa ubona
Ixesha lokuzisa Kwiintsuku ezingama-20 emva kokufumana idiphozithi okanye i-L / C yoqobo
Isiqinisekiso I-CE, i-FSC, i-EUTR, i-CARB,I-EPA, iJAS, ISO
Phawula Iivenkile ze-EV zikwabiza ii-veneers eziphindiweyo ezenziwe ngomthi ngamaplanga, le yenye yeebhodi zeefenitshala ezithengisa kakhulu. Sisebenzisela ukucebisa abathengi ukuba basebenzise ipoplar, isiseko se-combi kunye nesiseko se-eulyptus sokulwela iimveliso eziphezulu. iintlobo umphezulu kunokuba ezininzi kuthotho ezahlukeneyo, ezifana oki, iti, poplar, itsheri njalo njalo, kwaye sisebenza kunye zokugaya enkulu enkulu recon veneers umvelisi multichoice. kwaye le mveliso ilungele inqanaba lefanitshala kunye nezinto ezingaphezulu zokukhetha.
Ukupakisha Ukupakisha iPallet esemgangathweni esemgangathweni Ukupakisha kwangaphakathi Ipallet isongelwe ngengxowa yeplastiki eyi-0.20mm
Ukupakisha kwangaphandle Ipallet igutyungelwe ngeplywood okanye ibhokisi kwaye ke i-PVC / iiteyiphu zensimbi zamandla
Ilayisha Ubungakanani 20'GP 8pallets / 22cbm
Ukupakisha kunye neContainerization
Iplanga lezentengiso leFenitshala, iincopho zekhawuntari, ii-laminations, iikhitshi, kunye neminye imisebenzi yangaphakathi, kunye nolunye usetyenziso.
Egqithileyo I-HW 1.5-5MM I-Plywood efanelekileyo ye-Ilomba
Okulandelayo: I-HW 1220 * 2440mm Umgangatho ophezulu wePlywood yeeNgcaciso zeNtengiso kunye neBanga leFanitshala
12mm Birch ngamaplanga
18mm Birch ngamaplanga
I-Baltic Birch Plywood
Umgangatho ophezulu wePlywood yoRhwebo
IiKhabhathi zeBirch Plywood
Umgangatho ophezulu wePlywood
HW 1220 * 2440mm Umgangatho ophezulu wobunjineli we-Veneered ...
HW Radiata Pine F / B ngamaplanga oRhwebo